I-17th Century Cottage, i-Eden Valley, eCumbria
IRose Cottage yindlu yangasese evuselelwe ngothando ngenkulungwane ye-17 egcinwe kwilali yaseCumbrian. Sigcine umlinganiswa omdala wesakhiwo sokuqala kwaye songeza izinto ezintsha nezinomtsalane zasekhaya kunye nefenitshala. Ikhitshi elithandekayo, igumbi lokuphumla kunye negumbi eliphezulu lokulala elinebhedi enkulu kunye negumbi lokuhlambela elidityanisiweyo lelizwe elidibeneyo licocekile, langoku kodwa lithokomele ngazo zonke izinto ezitofotofo zanamhlanje. Iluncedo kuhola wemoto uM6 kunye namachibi asemantla ane-pub "The Pheasant Inn" ebonelela ngokutya okumnandi ngoLwesine-ngoMgqibelo
Vala uDonga lukaHadrian, iSithili seLake kunye nembali, iCarlisle, uya kuba nendawo kuwe. Ine-65” ye-smart tv, isandi esijikelezileyo, ishawari yemvula, isinki yaseBelfast kunye negadi eyimfihlo, iRose Cottage yindawo entle efihlakeleyo kuye nabani na ojonge ukubaleka kuphithizela. Kwaye ecaleni kwembasa ephumelele iPheasant Inn, unokuqiniseka ukuba uya kufumana ukutya kweklasi yokuqala kunye newayini ngempelaveki.
65" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Disney+, I-Netflix
Indawo yokutyela yempelaveki exakekileyo enophononongo olukhethekileyo lokutya kunye nenkonzo. Sikwakufuphi noDonga lukaHadrian, iLake Lakes, iCarlisle Castle kunye neNorthumberland.
Kuyavuyiswa ukudibana kunye nokubulisa neendwendwe ukuba oko zingathanda, kungenjalo, kwabo bajonge ukuhamba ngenene siyavuya ukukushiya wedwa kwaye sisebenzise ukuzijonga kwethu enkonzweni.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cumwhitton